FIM 2018: Niakatraka ho 150 ireo mpandray anjara | Madatopinfo
FIM 2018: Niakatraka ho 150 ireo mpandray anjara
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly teny amin’ny Forello Expo Tanjombato ny Foire Internationale de Madagascar na ny FIM, mandritra ny efatra andro izany ka tsy hifarana raha tsy ny Alahady 6 Mai ho avy izao. Mahatratra 150 ny isan’ny mpandray anjara miisa 150 tamin’ity andiany faha-13 ity. «Manome vahana amin’ny fampandrosoana ara-barotra eto amintsika ny fisian’ny hetsika toa izao, ary entina ampahafantarana ireo vokatra maro tsy dia fahita firy», hoy ny Filohan’ny Komity mpikarakara Michel Domenichini Ramiaramanana nandritra ny fandraisam-pitenenany. Efa hita soritra omaly fa liana amin’ny hetsika ara-barotra tahaka izao ny Malagasy noho ny fahatongavan’izy ireo marobe nitsidika ireo tranoheva teny an-toerana.
« Zava-dehibe ny fisian’ny FIM satria fotoana iray anehoana sy hifaneraserantsika amin’ireo mpandraharaha avy any ivelany sady ihany koa iankinan’ny fiharian-karen’i Madagasikara. Izay no mahatonga ny fitondram-panjakana manohana ny sehatra tsy miankina toa izao», hoy ny Ministry ny Varotra sy ny Fanjifana Chabani Nourdine nandritra ny lanonam-panokafana omaly.
Tsikaritra fa nahitam-pivoarana tokoa ity FIM 2018 ity, nihanitombo ny mpandray anjara ary samy manao ezaka hanatsarana hatrany ny vokatra sy ny kalitao izy ireo. Mandritra ireo efatra andro ireo mantsy dia maro ny hetsika ho hita etsy amin’ny Forello Expo Tanjombato ankoatran’ny varotra fampiratiana. Isan’izany ny fikaonandohan’ireo mpandraharaha eto amin’ny Ranomasimbe Indiana, hanatsarana ny tontolon’ny fifanakalozana ara-barotra eo amin’ireo Nosy Antsimo Antsinanan’ny Ranomasimbe Indiana.
Tsy hijanona hatreo ny hetsika izay hokarakarain’ny Première Ligne fa mbola ho maro izy ireo amin’ity taona ity, toy ny « Salon de l’Industrie de Madagascar » ny 21 hatramin’ny 24 jona ho avy izao eny amin’ny Forello Expo Tanjombato hatrany.